Diyaarso dhacdooyinka | Booqo Hultsfred
Kow iyo tobankii bilawga ahaa
Liiska hubinta corona
Ma haysaa wax fikrad ah?
Ma xiiseyneysaa inaad abaabusho dhacdo?
Mise waxaad rabtaa in lagaa caawiyo horumarinta mid jira?
Buuxi "kow iyo tobanka bilaaban" oo gudbi. Halkan, fikradaha ayaa run noqda!
Waa lagu arki karaa lagana maqli karaa Hultsfred!
Diyaarso dhacdooyinka degmada Hultsfred. Dhaqanka adag ee abaabulka munaasabadaha wuxuu dhisay shabakad adag oo leh karti aan caadi aheyn. Waxay sidoo kale ka dhigan tahay wadiiqooyin gaagaaban oo lagu diyaariyo waxyaabo meelo kala duwan looga baahan yahay dhacdo.
Hultsfred waa degmo yar oo yar, marka loo eego tirada dadka, laakiin tirada dhacdooyinka iyo garoomada lagu qabto munaasabadaha waa kuwo aad u tiro badan. Tusaale ahaan, sanad kasta qiyaastii 150 dhacdo oo muusig ayaa la qabanqaabiyaa, waxaa jira dad badan oo xiise leh oo u shaqeeya sida hal ku dhigga ah, ma shaqeyso, si kasta ayey u shaqeysaa. Ma xiiseyneysaa inaad abaabusho munaasabado ama aad rabto caawimaad sameynta mid jira? Ka bilow buuxinta "kow iyo tobanka" kow iyo tobanka su'aalood ee fudud ee laga jawaabayo, oo aad markaa u dirto kooxda dhacdada ee ku hoos jirta dhaqanka iyo maamulka xilliga firaaqada.
Buuxi "kow iyo tobanka bilow"
Tusaalooyinka dhacdooyinka gudahooda
Mawduuca Muusigga & Dhaqanka, Mootooyinka iyo Ciyaaraha & Caafimaadka
Wixii dhacdooyin dheeraad ah, eeg kalandarka dhacdooyinka ee visithultsfred
Wareega Fanka & Dhaqanka
Kulan Cagaf cagaf